July 2020 – " कञ्चनजंगा News "
सेनाले जो’खिममा रहेको ८० करोड उठायो:नेपाली सेना
No Comments on सेनाले जो’खिममा रहेको ८० करोड उठायो:नेपाली सेना
;+ljwfg lbj;df g]kfnsf] em08f ;lxt ¥ofnL bdf}nL, # c;f]h -/f;;_ M ;+ljwfg lbj;sf] cj;/df z'qmaf/ tgx'Fsf] bdf}nLdf cfof]lht ¥ofnLdf g]kfnsf] em08f ;lxt ;xefuL g]kfnL ;]gf . t:jL/ M s[i0f Gof}kfg]
नेपाली सेनाले विभिन्न वित्तिय संस्था जोखिममा रहेको ८० करोड रुपैयाँ उठाएको छ । अब ५ करोड २ लाख ६६ हजार रुपैयाँ मात्र उठाउन बाँकी छ ।
अघिल्लो वर्षसम्म सेनाको करिब २३ करोड रुपैयाँ नो’क्सान हुने जो’खिम थियो । तर, प्रभावकारी व्यवस्थापन एवं नि’क्षेप नीति अवलम्बन गरिएकाले हाल उल्लेख्य रुपमा घटेको सैनिक कल्याणकारी योजना निर्देशनालयका सहायक रथी सुरज केसीले बताए ।
शुक्रबार जंगीअड्डामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘जो’खिममा रहेको थप रकमलाई पनि क्रमशः घटाउँदै लैजाने योजना छ ।’
उनका अनुसार युनाइटेड विकास बैंकमा १ करोड ५६ लाख, नेपाल शेयर मार्केट एण्ड फाइनान्स लिमिटेडमा २ करोड ३ लाख, सम्झना फाइनान्स लिमिटेडमा एक करोड र हिमालय फाइनान्स लिमिटेडमा एक करोड रुपैयाँ छ ।
सैनिक कोषमा ४५ अर्ब ८६ करोड
केसीका अनुसार हाल सैनिक कल्याणकारी कोषको रकम ३८ अर्ब ५७ करोड ६१ लाखबाट बढेर ४५ अर्ब ८६ करोड ५० लाख पुगेको छ । यो वर्ष १८.९० प्रतिशत (७ अर्ब २९ करोड १९ लाख रुपैयाँ) ले कोषको रकम वृद्धि भएको छ ।
को’भिड–१९ को म’हामारीका कारण न’कारात्मक असर परे पनि कोषको समग्र प्रगति सन्तोषजनक रहेको केसीको भनाइ छ । उनका अनुसार विभिन्न निकायमा २०७७ असारसम्म गरिएको लगानी ५ अर्ब ७४ करोड २४ लाखलाई समेत समावेश गर्दा कोषको यथार्थ सम्पत्ति ५१ अर्ब ६१ करोड ४ लाख पुगेको छ ।
कोषको बेरुजु २० करोड १४ लाख १७ हजार रुपैयाँ रहेकामा असार मसान्तसम्ममा १२ करोड ७० लाख २३ हजार रुपैयाँ फर्च्छ्यौट भएको पनि केसीले जनाए ।
आफ्नो कामको समीक्षा गरेका छन् त प्रधानमन्त्रीले ?
No Comments on आफ्नो कामको समीक्षा गरेका छन् त प्रधानमन्त्रीले ?
काठमाडौं । विश्वको राजनीति हेर्दा संवैधानिक प्रजातन्त्रमा एक राजनीतिक दलले अर्को दललाई समर्थन या बिरोध गर्नु स्वाभाविक रुपमा लिने गरिन्छ । सरकारका काम कारबाहीको बारेमा आलोचना पनि स्वाभाविक नै मानिन्छ ।
नेपालमा झण्डै दुई तिहाईको बहुमत प्राप्त सरकार छ । यो सरकारले के काम राम्रो गर्यो अनि के नराम्रो, सवैका आ–आफ्नै दृष्टिकोण होलान् । तर, दुई तिहाईको सरकारका प्रधानमन्त्रीले के गरेँ त भनेर आफैं घोत्लिएका होलान् कि नहोलान् ? उनले विगतमा गरिएका विकासका गतिविधिलाई निरन्तरता दिने बाहेक नयाँ के गरेँ भनेर सोचेका छन् त ? कि दुई तिहाईको पगरी भिरेर त्यसै गमक्क छन् हाम्रा प्रधानमन्त्री ?
हुनत वर्तमान प्रधानमन्त्रीले नेपालको नक्सामा कालापानीलाई समेटेर एउटा राम्रो उदाहरण त दिए । राम्रो कामको स्वागत गर्नु पनि पर्दछ । यो बाहेक वर्तमान सरकारले अघिल्ला सत्तासीनहरुको निरन्तरतालाई नै अगाडि बढाएको देखिन्छ । तर, सत्ता टिकाउनका लागि ६० जनाको जम्बो मन्त्रीमण्डल बनाएर चर्चामा आएका अघिल्ला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेको कामकाज र वर्तमान प्रधानमन्त्रीको कामकाजमा चाहिँ केही फरक देखिएन ।
प्रधानमन्त्रीका नजिकका सल्लाहकारहरु प्रायः विवादित बनिरहे । कहिँ कतैबाट चुनौति नभएको यति शक्तिशाली सरकारका काम जनतामुखी रहेनन् । जनताको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने बेलामा वर्तमान रक्षामन्त्री आफ्नै रक्षामा लागे । सत्तामा आसिन व्यक्तिहरु आफ्नो स्वार्थसिद्धमा लिप्त हुँदा ३० वर्षदेखि काठमाडौंवासीको सपना मेलम्ची खानेपानी आयोजना पनि सम्पन्न हुनबाट वञ्चित छ ।
कोरोना महामारी तिव्र हुँदै गएको समयमा लकडाउन खुला गर्नुलाई जनताले अर्थपूर्ण रुपमा लिएका छन् । कर उठाउनका लागि सरकारले जनताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्न मिल्छ ? देशको वागडोर सम्हालेपछि आफ्नो पार्टीको समस्या देखाउने हैन, जनताको हितमा काम गर्नुपर्छ । पार्र्टीभित्रको विवादलाई नै देखाएर कामकाज गर्न सकिएन भन्नु पनि सान्दर्भिक नहोला ।
प्रधानमन्त्रीलाई कुनै किसिमको दवाव तथा छेकबार कहिँ कतैबाट आएको देखिएको छैन । प्रतिपक्ष पनि चुप लागेरै बसेको अवस्था छ । यस्तो अनुकुल वातावरणमा त फटाफट सरकारले आफ्नो काम देखाउनुपर्ने होइन र ? राष्ट्र, राष्ट्रियता तथा जनताको पक्षमा किन सरकारबाट केही सम्वोधन हुँदैन ? यो सरकार किन कामचलाउ जस्तो भएको हो ? जस्ता प्रश्न आम जनताका हुन् ।
शक्तिमा रहँदा काम गर्न नसक्ने अनि अरुलाई दोष दिने प्रवृत्ति भनेको चुनावमा हारेको नेताले अन्तरघातलाई बहाना बनाए जस्तै हो । समयको सदुपयोग गर्न नसक्ने नेता र नेतृत्व कहिल्यै सफल हुन सक्दैन । जित्नेले माला लगाउँछ, बहाना गर्नेले चिया पसलमा गफ गर्छ । त्यसैले देश र जनताको माग अनुसार आफ्नो निर्णय क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्दछ । दोष देखाएर होइन, चुनौतिका बीच काम गर्नसक्ने हिम्मत देखाएर जनतामा आफूलाई स्थापित गर्न सक्नुपर्दछ ।
यदि प्रधानमन्त्रीका लागि आगामी केन्द्रीय समिति अनुकुल छैन भन्ने हो भने पनि, केन्द्रीय समिति बस्नु भन्दा पहिलाको झण्डै एक महिनाको समय त प्रधानमन्त्रीसँग छ नि । भनिन्छ एकक्षणको एउटा निर्णयले नेतालाई राजनेता बनाइ दिन्छ । यो एक महिनाको लागि सदुपयोग गर्न सकियो र प्रधानमन्त्रीको रक्षाकवच स्वयं जनता बन्न गए भने अहिलेको पार्र्टीभित्रको विपक्षी खेमा रक्षात्मक पंक्तिमा उभिन विवश हुने थिए कि ?
बुद्दिसागरको तीज गीत ‘बाहिर जाँदा कोरोनाको डर, घर बसौँ बुढिको करकर’ (भिडिओसहित)
No Comments on बुद्दिसागरको तीज गीत ‘बाहिर जाँदा कोरोनाको डर, घर बसौँ बुढिको करकर’ (भिडिओसहित)
काठमाडौं । लोक तथा दोहोरी गीतमा छुट्टै पहिचान बनाएका गायक बुद्धिसागर बस्यालले यो वर्षको तीजमा निकै धमाकेदार गीत सार्वजनिक गरेका छन् । अहिले मुलुकले भोगेको कोरोनालाई तीज गीतमा जाडेर रमाइलो प्रस्तुती गरेका छन् । उनको यो पहिलो तीज गीत ‘चस्मा लाएर’सार्वजनिक भएको हो । लोक दोहोरीका क्षेत्रमा प्रख्यात वस्यालले तीज गीतमा पनि आफ्नो राम्रो छाप बनाउन सक्ने गीतवाट अनुमान लगाउन सकिन्छ । सार्वजनिक भएको गीतमा निकै राम्रा प्रतिकृया आएका छन् । गीतमा शब्द तथा स्वर बस्यालकै रहेको छ ।
‘बाहिर जाँदा कोरोनाको डर, घर बसौँ बुढिको करकर’ जस्ता शब्द गीतमा प्रयोग गरिएको छ । अहिले मुलुकले भोगेको समस्यालाई गीतमा समावेश गरिएको छ । सत्कर्मको संगीत रहेको उक्त गीतको भिडिओ विवेक खड्काले निर्देशन गरेका छन् । गीतको म्युजिक भिडियोमा किस्मत भण्डारी, उदिरम खड्का, ज्ञान प्रसाद पोखरेल, दिपक भण्डारी, अर्जुन अर्याल, कृष्ण डाँगी लगायतको अभिनय रहेको छ ।
बिहीबार सार्वजनिक भएको गीत बस्यालको आफ्नै युट्युब च्यानलमा हेर्न सकिने उनले जानकारी गराएका छन् ।‘बाजेका पालामा मोहोरपाथी नुन’, ‘डाँफे नाचेर, छमछम पाउजुले’, ‘मुरलीको धुन’ लगायतका निकै लोकप्रिय गीत उनले वजारमा ल्याइसकेका छन् । जसले उनलाई सांगितीक क्षेत्रमा स्थापित गराएको छ ।
गायक बस्यालले लकडाउनमा नेपालमै रहेको बेला कोरोना भाइरस, लकडाउन र अहिलेको परिवेशलाई समेटेर तीज गीत बजारमा ल्याएको बताए । १४ बर्षदेखि क्यानडा बसिरहेका बस्याल अहिले नेपालमै रहेको बेलामा तीज गीत सार्वजनिक गरेका हुन् ।
आफु स्वदेश वा विदेशमा हुँदा पनि दर्शक श्रोताको अटुट माया पाईराखेको भएकाले फ्यानकै आग्रहमा तीज गीत सार्वजनिक गरेको बताएका छन् ।
No Comments on काठमाण्डौ उपत्यकामा बस्नुहुन्छ सरकारले जारिगरेको यो सूचना पढ्नुहोस र मात्र घरबाहिर निस्कनुहोला
कोरोनाले दुर्घटना निम्त्याउँदैछ, हेलचेक्र्याई नगरौँ : स्वास्थ्य मन्त्रालय(भिडियोसहित)
No Comments on कोरोनाले दुर्घटना निम्त्याउँदैछ, हेलचेक्र्याई नगरौँ : स्वास्थ्य मन्त्रालय(भिडियोसहित)
साउन १६, काठमाण्डौ । सरकारले नेपालमा कोरोना संक्रमणको महामारी सुरु भएको ठहर गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आमसभा, सभा तथा धेरै भिडभाड हुन थालेको भन्दै त्यसलाई दुखद भनेको छ । मन्त्रालयले त्यस्ता कार्यक्रम नगर्न आग्रह पनि गरेको छ । काठमाण्डौ उपत्यकामा संक्रमितको संख्या बढिरहेको निष्कर्ष निकाल्दै मन्त्रालयले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन आग्रह पनि गरेको छ ।
नागरिकले देशभरका ठूला सहर र नाकामा सतर्कतान नअपनाइएको भन्दै जनस्वास्थ्यमा ठूलो दुर्घटना ल्याउन सने चेतावनी पनि मन्त्रालयले दिएको छ । भारतबाट २१ जना कामदार ओखलढुंगा लगिएको र तिमध्ये १८ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिदै मन्त्रालयले जोखिम बढेको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले संक्रमण बढ्दै गएको खण्डमा उपचारका लागि समयसमेत नपाउने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
भारतमा संक्रमण तीब्र रुपमा बढिरहँदा नेपालमा पनि जोखिम भएको गौतमले बताए । नेपालसँग जोडिएका भारतका उत्तारान्चल, उत्तरप्रदेश, विहार र वेस्ट बंगाल गरी चार प्रदेशमा संक्रमण बढ्दा नेपालमा पनि जोखिम बढेको गौतमले बताए ।
वीरगंजमा मात्रै २८ जना स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना संक्रमण पुष्टी भएको भन्दै गौतमले उच्च सतर्कता अपनाउनुको विकल्प नभएको बताए ।
पछिल्लो विवरण :
नेपालमा बितेको २४ घण्टामा २२४ जनामा कोरोना भाईरस (कोभिड(१९) संक्रमण पुष्टि भएको छ । उक्त संख्यामध्ये काठमाण्डौ उपत्यकामा मात्रै ३८ जना रहेको छ । काठमाडौंमा ३२, ललितपुरमा ५ जना र भक्तपुरमा १ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो । यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १९ हजार ७ सय ७१ पुगेको छ । संक्रमितमध्ये ५६ जनाको मृत्यु भएको छ । आज मात्रै ४ जना मृतक थपिएका हुन् । मृत्यु भएकामध्ये तीन जना पुरुष पर्साका र १ जना ललितपुरकी महिला रहेकी छिन् ।
पछिल्ला दिनमा दैनिक दुई देखि चार जनाको मृत्यु भइरहेको छ । कुल संक्रमित मध्ये ७२.८ प्रतिशत संक्रमित कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् । आज १ सय ५१ जना उपचारपछि निको भएका छन् । योसँगै निको हुनेको कूल संख्या १४ हजार ३ सय ९९ पुगेको छ । ५ हजार ३ सय १६ सक्रमितको उपचार भइरहेको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टामा १० हजार ७ सय ६८ जनाको पिसिआर परीक्षण भएको छ । यो एकैदिन गरिएकोमध्ये अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै परिक्षण संखया हो । हालसम्म ३ लाख ७५ हजार ४ सय १६ जनाको पिसिआर परीक्षण भएको छ ।
जापानमा फेरि बढे कोरोना संक्रमित, लाग्न सक्छ संकटकाल
No Comments on जापानमा फेरि बढे कोरोना संक्रमित, लाग्न सक्छ संकटकाल
जापानमा फेरि पनि कोरोनाभाइरस संक्रमितको संख्या बढ्न थालेको छ । यसका साथसाथै त्यहाँको राजधानी टोकियोका अधिकारीहरुले अब फेरि समस्या बढ्दै गएमा जापानमा आपतकाल लाग्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
जापानमा बिहीबार पहिलो पटक १ हजारभन्दा धेरै कोरोनाभाइरस संक्रमित थपिएका छन् । जापानको राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी एनएचकेका अनुसार यसभन्दा पहिले जापानमा ९ सय ८१ जना मात्र कोरोनाभाइरस संक्रमित थपिएका थिए ।
एक साता पहिले जापानमा पर्यटनको प्रोत्साहनका लागि राष्ट्रिय स्तर एक अभियान चलाइएको थियो ।
तर, विश्व स्वास्थ्य संगठनले यस्तो फैसलामाथि टिप्पणी गरेको छ । अब संक्रमण केवल टोकियोमा मात्र होइन, त्यहाँभन्दा बाहिर पनि फैलिएको छ ।
जापानका विकट टापुहरुमा पनि अब कोरोनाभाइरस संक्रमित भेटिन थालेको बताइएको छ ।
बेइमानी गर्न राजनीतिमा आएको हैन: गोकुल बाँस्कोटा
No Comments on बेइमानी गर्न राजनीतिमा आएको हैन: गोकुल बाँस्कोटा
काठमाडौं – पूर्वमन्त्री तथा प्रतिधिनिसभा सदस्य गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बेइमानीका लागि राजनीतिमा नआएको बताएका छन् ।
जिल्ला सहकारी सङ्घ लिमिटेड काभ्रेपलाञ्चोकद्वारा सहकारी बजार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत आज सहकारीका लागि उपलब्ध गाडीको साँचो हस्तान्तरण कार्यक्रममा उनले आफू पारदर्शीताको मानक स्थापना गर्न लागिपरेको बताए । उनले भने, “पारदर्शीको मानक स्थापना गर्न लागेको छु, मानिसको व्यक्तिगत, सामाजिक र राजनीतिक पारदर्शीता नभए कुनै काम लाग्दैन ।”
पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाले समृद्धिको एउटा आधारस्तम्भ सहकारी क्षेत्र भएकाले सहकारी र समाजवाद सँगसँगै अगाडि बढ्ने उल्लेख गर्दै राजकीय पूँजी, नीजि पूँजी र सहकारीको पूँजी परिचालनले मात्रै मुलुकको समृद्धि सम्भव छ, त्यसैले सहकारी क्षेत्र आर्थिक समृद्धिको एउटा आधार मानिएको समेत बताए । उनले मुलुकको तीनखम्बे अर्थनीतिसँगै वैदेशिक सहायता तथा अनुदान पनि सँगसँगै जाने बताए ।
“वर्तमान अवस्थामा मुलुकको समृद्धिको अर्को आधार श्रम र प्रविधि हस्तान्तरण पनि प्रमुख विषय बनेको छ”, पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाले भने, “श्रम र प्रविधि विस्तार गर्दै आर्थिक समृद्धितर्फ लाग्नुपर्छ ।”
सरापले श्रीमतीलाई तीजमा छड्के तिलहरी न किनेपछि चोरिन श्रीमानकै पैसा (भिडियो)
No Comments on सरापले श्रीमतीलाई तीजमा छड्के तिलहरी न किनेपछि चोरिन श्रीमानकै पैसा (भिडियो)
१६ साउन, काठमाडौं । गायिका सिर्जना खत्री( हाउडेमाया) को तिज कोसेली ‘छड्के तिलहरि ‘सार्बजनिक भएको छ ।गितमा सिर्जना खत्री र टेक अधिकारि को स्वर रहेको छ भने लय तथा शब्द सृजना रेशम प्रधान को रहेको छ
महेश बिक्रम पाण्डे को एरेन्ज रहेको उक्त गीतमा नारीहरुको कथालाई नै लक्षित गरिएको छ ।उक्त गीतमा कमेडियन यादव देवकोटा (सरापे ) र आयुष्मा कार्किको रोमान्चक अभिनय संगै उत्कृस्ट प्रस्तुति देख्न सकिन्छ भने गीतको भिडियो निर्देशन तथा सम्पादन युबराज खत्री ले गरेका छन |
भोलि शनिबार संकटा मन्दिरको दर्शन गरि ०७७ साउन १७ गते शनिवार ई.सं. २०२० अगष्ट ०१ तारिखको राशिफल हेर्नुहोस
No Comments on भोलि शनिबार संकटा मन्दिरको दर्शन गरि ०७७ साउन १७ गते शनिवार ई.सं. २०२० अगष्ट ०१ तारिखको राशिफल हेर्नुहोस
वि.सं.२०७७ साउन- १७, शनिवार,ई.सं. २०२० अगष्ट -१,शक संवत्-१९४२,नेपाल संवत्-११४० गुँलाथ्व, प्रमादी, दक्षिणायन, वर्षा, श्रावण शुक्लपक्ष तिथि-त्रयोदशी , २१:३७ बजे उप्रान्त चतुर्दशी,नक्षत्र -मूल , ०७:४४ बजे उप्रान्त पूर्वाषाढा,योग-वैधृति , ११:०८ बजे उप्रान्त विष्कम्भ,करण-कौलव १०:१० बजेदेखि तैतिल , २१:३७ बजे उप्रान्त भद्रा,चन्द्रराशि-धनु,आनन्दादि योग-गद, सूर्योदय-५:२८, सूर्यास्त-१८:५१,दिनमान-३३ घडी २८ पला, व्रत/पर्व-शनि–प्रदोष व्रत।
No Comments on आफ्नै बुवा समानको काकाले पटक-पटक गरे ब’ला’त्कार , कसैको सहयोग नपाएको भन्दै रु’दै आईन मिडियामा (भिडियो हेर्नुस्)